HTC One X - ÄÑÐRÖÏÐ PÄLÄCE
wai phyo | 2:58 PM | Mobile News
Android OS သုံး Smart Phone တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ.HTC company က နည်းပညာမြင်. ဖုန်းတလုံးဖြစ်တဲ. HTC One X ကို ဖြန်.ချီခဲ.ပါတယ်..
GSM network အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းလေးက ရိုးရှင်းပါတယ်..ဖုန်းရဲ. အထူက တော.9mm ရှိပြီး ကိုယ်ထည်ကို polycarbonate – posh plasticနဲ. ပြုလုပ်ထားတာကြောင်း ပေါ.ပါးပါတယ်။ဖုန်းရဲ. မျက်နှာပြင်က Super IPS LCD2 capacitive touchscreen အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Gorilla Glass နဲ. ကာကွယ်ထားပါတယ်။ Screen Size 4.7 inch ရှိပြီး Resolution 720 x 1280 pixels ရှိတာကြောင်. HD Game တွေကစား ရတာ အရသာရှိပါလိမ်.မယ်။
ကင်မရာကို 8 MegaPixel ရှိတဲ့ ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ရုပ်ထွက်မြင့်မားတဲ့ 1080p HD video များကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ရှေ့ကင်မရာကိုတော့ 1.3 MegaPixel ရှိတဲ့ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ထားပြီး Video Chat လုပ်ကြည့်ရာမှာ ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဖုန်းရဲ. OS ကတော. Android ရဲ.နာမည်ကျော် ICS (4.0) ကို အသုံးပြုထားပြီး NVIDIA Tegra 1.5 GHz quadcore processor ကိုတပ်ဆင်ထားတာကြောင့် ဖုန်းရဲ့ processor ကလည်းအရမ်းကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Internel Memory 32 GB ပါဝင်သလို RAM ကလဲ 1GB ရှိပါတယ် ။ CPU က Quadcore 1.5 GHz ဖြစ်တဲ.အတွက် သုံးရတာ မြန်ဆန်နေပါလိမ်.မယ်..။ နောက်ဆုံးပေါ် NFC နည်းပညာကိုလဲ ထောက်ပံပေးပါတယ်...အသံပိုင်းမှာလဲDr Dre Beats ရဲ့ အသံစနစ်နဲ့ Hardware တွေနဲ့တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် သီချင်းနားထောင်ရာမှာအကောင်းဆုံးအသံစနစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော. အောက်မှာ ကြည်.ရှုနိုင်ပါတယ်